ICloud activation yakanganiswa pane iOS 11.1? Zvinoita sekudaro | IPhone nhau
Kubata iCloud ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza dzatinogona kusarudza nhasi nemadivayisi edu eIOS mune zvese, kusanganisira iyo iPad uye iPhone. Kutenda kune ino system, pese patinotangazve iyo iPhone kana kuidzosera, iyo sisitimu inotumira yekushandisa chikumbiro kuburikidza neinternet kune iCloud masystem uye anotibvunza isu account yeApple iyo yakati chishandiso chakabatana.
Izvi zvinoreva kuti kunyangwe tikanetsekei kuita fungidziro, kana tiine chishandiso cheIOS chisiri chedu, hatigone kuwana foni zvachose, tine pepa rehuremu rakanaka rakagadzirwa muCupertino. Kunyange zvakadaro, nguva nenguva bugs dzinoonekwa senge iyo isu yatinoda kukuratidza nhasi inoisa kuchengetedzeka kwenhamba yakanaka yemidziyo panjodzi yakakomba.
Kuita mashandiro acho Tsvaga yangu iPhone Hatichafanirwe kunetseka nezvenyaya yekumisikidza, nekuti kubva zvino zvichazoshanda zvoga. Zvakadaro EverythingApplePro inotitaridza hunyengeri hunotibvumidza kupfuura iCloud activation uye kuwana iyo iPhone iyo ine zvese iOS 11 uye iOS 11.1 yakaiswa senge nyowani, uye idzi inyaya dzakaipa kwazvo. Zvinotaridza kuti isu tinofanirwa kumirira iOS 11.2 kuti tione dambudziko iri ragadziriswa, isu tinofungidzira kuti muCupertino hazvizotora nguva yakareba.
Iyo inotibvumidza isu kuenda zvakananga kubva kuiyo activation skrini kune sarudzo yekodhiKana tapinda kodhi isiriyo, tinomirira ingangoita maminitsi makumi matanhatu toedza zvakare, nekodhi isiriyo. Pasina kujeka pfungwa, zvinotirega isu tichienderera kuchikamu chinotevera uye isu tichienderera neiyo iPhone sekunge yanga iri yedu, famba iCloud activation. Iyo haina kutaridzika zvakanaka zvachose, nekuti izvi zvinoremadza mashandiro uye ndiyo umpteenth yakakosha kukanganisa kweIOS 11, tichaita bvunzo muIOS 11.2 kuti tione mhedzisiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » ICloud activation yakanganiswa pane iOS 11.1? Inoita kunge iri
Apple yakagadzika madhivha ekhibhodi muIOS 11.2 beta 2